​बालुवाटार बैठकबाट निस्कदै गर्दा के भने केपी ओली ? – Gulmiews
९ जेष्ठ २०७४, मंगलवार १८:३७ गुल्मिन्युज
७ जेठ, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई हराउने उद्देश्यले स्थानीय तहको संख्या बढाएको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष तीन दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले भने– –कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई लोकलाज केहि छैन । चुनावकै बीचमा बजेट ल्याउन खोजिन्छ । कसैलाई सरकार छाड्न मन छ । कस्तो विवसता ? कसैलाई प्रम हुनु हतार छ । निर्जज्जताको पनि हत हुन्छ ।
जहाँजहाँ एमालेले जित्छ त्यहाँत्यहाँ स्थानीय तह परिवर्तन गरिएको छ । त्यसमा एमालेको समर्थन हुन सक्दैन । – स्थानीय तह संख्या कुन कानुन र कुन धाराका आधारमा गरिएको भनि बैठकमा प्रश्न राख्यौं ्र –कति तह बढाउने÷घटाउने भन्नेमा संवैधानिक तबलरले विधि र प्रक्रियामार्फत जानुपर्छ । सरकारमा गएपछि कानुन नलाग्ने संविधान मान्नुनपर्ने ? –अहिले निर्वाचन प्रभावित हुने गरी सरकारले केहि पनि गर्न हुन्न । बजेट ल्याउन मिल्दैन । Comments comments	Comments are closed.